Qorshooyinkii u degsanaa Cabdi Maxamuud Cumar saddex sano kahor inta uusan xilka wareejin | Biyoguurenews.com
Home Wararka Qorshooyinkii u degsanaa Cabdi Maxamuud Cumar saddex sano kahor inta uusan xilka...
Madaxweynihii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xilka madaxtinnimada wareejiyay saddex sano kahor maanta oo kale, ka dib siddeed sano oo uu xilkaas hayay.
Arrintan ayaa ka dambeysay ka dib rabshado hareeyay magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad Deegaanka, iyadoo ay jireen isku dhacyo u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada oo khasaaro nafeed iyo mid hantiba geystay.
Maalin ka dib, waxaa Cabdi Maxamuud Cumar qabtay ciidamada Itoobiya oo markii dambe u qaaday magaalada Addis Ababa oo weli uu ku xiran yahay.
Cabdi wuxuu ku eedaysan yahay inuu gaystay “dil, xarig aan loo meel dayin, jir dil iyo ku takri fal awoodeed,” xilligii ay rabshada ka socdee Jigjiga ee Bishii August 2018. Balse dhankiisa wuu iska fogeeyay dhammaan eedeymahaas.
Intii uu Cabdi madaxweynaha ahaa waxay hay’adaha Xuquuqda Aadanaha u dooda ku eedeeyeen in tacadiyo laga geystay deegaanka, gaar ahaan Jeel Ogaadeen oo ay ku xirnaayeen dad badan oo loo haystay in ay ka tirsanaayeen Jabhadaha ama ay taageerayeen.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xilka sii hayay ka dib markii isbedello ay ka dheceen Itoobiya oo xilka ra’iisul wasaaraha uu qabtay Abiy Axmed.
Xil-wareejintiisii iyo xariggiisaba waxay ahaayeen kuwo aan la fileyn, waxaana jiray qorshooyin u degsanaa kahor inta uusan xilka banneenynin oo aan la xirin, sida uu ku sheegay hadallo oo meelo kala duwan ka jeediyay.
Waxaan soo qaadaneynaa mid ka mid ah khudbadihii ugu dambeysay ee meel fagaare ah uu ka jeediyay:
Maxay ahaayeen qorshooyinkaas?
Cabdi Maxamuud Cumar oo soo muuqday markii koowaad isaga oo askarta hareer socota aysan ahayn kuwa waardiye ka haya, balse ay yihiin kuwa xiraya
1 – Wuxuu muujiyay in uu dabcay ONLF
Mar uu ka hadlayay munaasabadda 100-ka maalmood ee uu xilka hayay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, wuxuu Cabdi Maxamuud Cumar ugu baaqay in ONLF (Jabhadda Waddaniga ah ee Xoreynta Ogaadeeniya) inay ka faa’iidaystaan baaqa ra’iisul wasaaraha u jeediyey jabhadaha iyo xisbiyada mucaaradka ee ah in ay nabad qaataan.
Jabhadda ONLF oo uu markaas baarlamaanka dalka Itoobiya ka saaray liiska ururrada argagixisada, ayuu weydiistay in fursadda la siiyey iyaga oo ka faa’ideysanaya ay si nabadgelyo ah siyaasaddooda u wataan.
Ciidammada ONLF oo 20 sano kaddib gaaray Jigjiga (November, 2018)
“Hoggaanka jabhadda colaaddii iyo naceybkii hore ee sannado badan ay waddanka u hayeen intey dhinac iska dhigaan, dadaallada nabadeed ee dalka ka socda waa inay qayb ka noqdaan,” ayuu yiri Cabdi Maxamuud Cumar.
“Dhammaan maxaabiistii u xirneyd deegaanka ee jabhadda ONLF waa la sii wada daayey, wakhti xaadirkan hal qof oo jabhadda ONLF darteed u xiran ma jiro,” ayuu sii raaciyey.
2 – Cafis uu dalbaday iyo in la saxo Khaladaadkii dhacay
Wuxuu sheegay in mar kasta oo shaqo la qabanayo uu khalad dhici karo, “balse wararka brobagaandada marka la iska reebo, wixii aan khaladkiisa leennahay in aan saxno ayaan diyaar u nahay,” ayuu ku yiri khudbad uu jeediyay bartamihii bishii July 2018.
Wuxuu kaloo uu sheegay Cabdi Maxamuud Cumar in khaladaadka horay u dhacay ay mas’uuliyaddooda qaadayaan xukuumadda deegaanka iyo xisbiga talada haya, wuxuuna cafis ka dalbaday shacabka deegaanka.
“Dhammaanteen waa in aan khaladkeenna qiranno, isla markaana aan dalbanno cafis, dhaqankaas ayaa loo baahan yahay in aan dhammaanteen caadeysanno,” ayuu yiri.
Dadkii lagu Xiray Jeel Ogaadeen waxay ka sheekeeyaan sheekooyin naxdin leh
Isla munaasabaddaas 100-kii maalmood ee uu xilka hayay Abiy, wuxuu Cabdi ka sheegay in la qorsheynayo in la xiro jeelkii Dhexe ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee loo yaqaannay Jeel Ogaadeen.
“Waxaan qorshaha ku darsannay oo aan fulinteedana hirgelin doonnaa in aan xabsiyada ka dhigno xarumo horumarineed, tusaale ahaan xabsiga oo kale iskuul loo beddelo, masaajid loo beddelo, xero caafimaad loo beddelo, iyo in kharashkii ku baxayay loo adeegsado dhanka horumarka”, ayuu u sheegay dadkii dhageysanayay.
Xabsigaas oo tacaddiyo badan loogu gaysan jiray dadka maxaabiis ah sida ay sheegeen hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha, ugu dambeyn waxaa la xiray bishii September ee sannadkii 2018.
Sannadkii 1996 ayaa la aasaasay Jeel Ogaadeen. Xilligaas waxaa madaxweynaha killilka ka ahaa Khadar Macallin Cali.
Inkastoo magaalada Jigjiga ay fiday, haddana waxaa xilligaas magaalada laga fogeeyey jeelka oo laga dhisay 5-6 KM goob u jirtay. Balse hadda magaalada ayaa fidday oo dhaaftay, waxaana la oran karaa wuxuu ku yaallaa bartamaha meelo ku dhow.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo in uu sii wado isbeddellada horumarineed iyo kuwa nabadeed ee uu horseeday maamulka Abiy Axmed, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dhanka dhaqaalaha iyo cafinta loo fidiyay jabhadaha.
“Waxaa loo baahan yahay in nidaamkan uu degdeg ku shaqeeyo, shacabka dartii, masaakiinta dartood, in hore loo sii socdo ayaa la rabaa. Gacmo isku duubni ayay wax ku qabtaan, isku duubni ayaan qorshaheenna ku dhaqaajineynaa,” Ayuu yiri.
Previous articleRihanna oo haatan si rasmi ah u noqotay bilyaneer
Next articleLiiska Magacyada 20 Xildhibaan oo Gudoomiyaha Cusub ee Barlamaanka S/land u magacaabay Dibu-habeynta Xeer-hoosaadka Golaha